Kiobà sy ny niandohan'ny anarany | Fitsangatsanganana tanteraka
Daniel | 15/04/2021 12:27 | Nohavaozina amin'ny 15/04/2021 13:27 | Kiobà
Io no nosy lehibe indrindra any Antilles ary iray amin'ireo toerana fizahan-tany tsara indrindra any Karaiba. Toerana tokana sy manokana noho ny antony maro ary miaraka amin'ny tantara lava sy mahaliana. Fa, Avy aiza ny anaran'i Cuba? Inona no niandohan'ny anarany? Io no fanontaniana ezahintsika hovahana amin'ity lahatsoratra ity.
Ny marina dia ny fiandohan'ny teny etimolojika amin'ny teny Kiobà tsy mazava mihintsy ary mbola resa-be ao amin'ny siansa ankehitriny. Misy fisainana maromaro, ny sasany ekena kokoa noho ny hafa, ary ny sasany amin'izy ireo dia tena liana.
Voalohany indrindra, teboka manan-danja iray dia tsy maintsy hazavaina: rahoviana Christopher Columbus Sambany tonga teto amin'ny nosy izy (tamin'ny 28 Oktobra 1492), tsy nieritreritra mihitsy izy hoe hanitsaka kontinanta vaovao. Raha ny marina, araka ny fanisana diso nataon'izy ireo, io tany vaovao io dia mety ho i Cipango ihany (araka ny nahafantarana an'i Japana tamin'izany fotoana izany), izay tsy noheverina hojerena ny mety hanaovana batemy ilay nosy amin'ny fomba rehetra.
Tonga tany amin'ny nosy i Christopher Columbus tamin'ny 28 Oktobra 1492, nandre ny teny "Cuba" avy am-bavan'ireo vazimba teratany.
Taona maro taty aoriana dia nanapa-kevitra ny Espaniola ny hanome ity anarana ity tamin'ny anarana hoe Nosy Juana, ho fanomezam-boninahitra ny printsy tanora John, ny lahy tokana an'ny Mpanjaka katolika. Na izany aza, tsy nahomby io anarana io. Tsy isalasalana fa nisy fiantraikany tamin'ny fahafatesan'ny olona tsy tonga volana tamin'ny 1497 ilay olona nantsoina handimby ny satro-boninahitra, tamin'ny faha-19 taonany.
Taorian'izay, tamin'ny alàlan'ny didim-panjakana tamin'ny 28 feb 1515, dia nisy ny fanandramana natao fa ny anarana ofisialy Cuba dia ny Nosy Fernandina, ho fanomezam-boninahitra ny mpanjaka, saingy tsy nahatratra ny anarany ilay toerana. Raha ny marina, ny hetsika ofisialy tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia tsy miresaka afa-tsy io faritany io amin'ny anarana hoe Cuba.
1 Taranaka vazimba
2 Fanaparitahana mampieritreritra momba ny niandohan'ny teny Cuba
2.1 Ny teôria portogey
2.2 Ny teôria arabo
Androany ny fanazavana eken'ny maro amin'ny fanontaniana hoe "avy aiza ny anaran'i Cuba? fiaviana zanatany.
Kioban maro no tia ny hevitra fa ny anaran'ny fireneny dia avy amin'ny teny indizeny taloha: Kuba, ampiasaina angamba amin'ny fiteny ampiasain'ny Taínos. Midika io teny io "Tany" na "zaridaina." Raha ny fiheverana an'io teoria io dia mety i Columbus tenany no naheno an'io antokom-pinoana voalohany io.
Ankoatr'izay, azo inoana fa io teny io ihany no nampiasan'ny olona aboriginal hafa tao amin'ny nosy Karaiba hafa, izay ny fitenin'izy ireo dia avy amin'ny fotony iray ihany, ny fianakavian'ny fiteny Arauca.
Avy aiza ny anaran'i Cuba? Raha ny filazan'ny manam-pahaizana sasany dia mety hoe tendrombohitra sy havoana izy io
Ao anatin'io fomban-drazana io ihany, dia misy variant hafa izay milaza fa ny dikan'io anarana io dia azo ampifandraisina amin'ireo toerana misy toerana ambony sy tendrombohitra. Toa aseho amin'ny anaran'ny toerana sasany mety aminy io Kiobà, Haiti ary ny Repoblika Dominikanina.
Ny ray Bartolomé de las Casas, izay nandray anjara tamin'ny fandresena sy fitoriana filazantsara ny nosy teo anelanelan'ny 1512 sy 1515, dia nanasongadina tamin'ny sanganasany ny fampiasana ny teny hoe "cuba" sy "cibao" ho mitovy dika amin'ny vato sy tendrombohitra lehibe. Etsy ankilany, nanomboka teo ary mandraka ankehitriny ny anarana zanatany ny Cubanacan mankany amin'ireo faritra be tendrombohitra any afovoan'ilay firenena sy Atsinanana.
Ny anaran'ny Kiobà dia iray amin'ireo tranga nanoratan'ny tontolo ny anarany ny firenena. Mampalahelo fa ny tsy fahampian'ny fahalalantsika ankehitriny momba ny fiteny Taino sy Antillean dia manakana antsika tsy hanamafy izany amin'ny fomba hentitra kokoa.
Fanaparitahana mampieritreritra momba ny niandohan'ny teny Cuba
Na dia misy aza ny marimaritra iraisana eo amin'ny mpahay tantara sy ny mpandinika ny fiteny momba ny toerana niavian'ny anaran'i Kiobà, dia misy kosa fiheverana mahaliana hafa tokony horesahina:
Ny teôria portogey
Misy koa a Fomban-kevitra portogey hanazava hoe avy aiza ny anaran'i Cuba, na dia tsy dia dinihina loatra aza izao. Araka io teôria io, ny teny hoe "Cuba" dia avy amin'ny tanàna any atsimon'i Portugal mitondra an'io anarana io.
Sarivongana Columbus ao amin'ny tanànan'ny Portiogey, Kiobà
Ny "Cuba" any Portugal dia any amin'ny faritr'i Baixo Alentejo, akaikin'ny tanànan'i Beja. Iray amin'ireo toerana milaza ho toerana nahaterahan'i Columbus (raha ny marina dia misy ny sarivongan'ilay mahita ao an-tanàna). Ny hevitra manohana an'io teôria io dia ny hoe izy no hanao batemy ny nosy Karaiba ho fahatsiarovana ny tanindrazany.
Na dia fiheverana mahaliana aza izany dia tsy dia misy henjana ara-tantara.
Ny teôria arabo
Mbola lavitra kokoa noho ny teo aloha, na dia misy mpanohana azy ihany koa aza. Raha ny filazany, ny solon'anarana "Cuba" dia mety ho fiovan'ny ny teny arabika koba. Izy io dia nampiasaina hanondroana moske izay tampon-dome.
Ny teôria arabo dia miorina eo amin'ny toerana misy an'i Christopher Columbus, ny Bariay bay, ao amin'ny faritanin'i Holguín ankehitriny. Tao no mety ho endrika fisaka an-tendrombohitra akaikin'ny morontsiraka izay nampahatsiahy ny mpitety ny koba Arabo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Kiobà sy ny niandohan'ny anarany
Mamy sy tsindrin-tsakafo marokana mahazatra